Yintoni I-Spinning? - I-Khachaturyan Nataliya, u-Expert Semalt, uchaza indlela yokwenza ngcono i-Content For SEO Purposes
Isihloko sokuprintwa yinkqubo yokubhala kwakhona amanqaku ukwakha ikopi yokuqala kunye nokuphepha imiba yezinto ezinokubangela izigwebo ezivela kwiGoogle, Bing, ne-Yahoo. Injongo kukubhalwa kwinqaku uze udale iikopi zayo ezizodwa kwiwaka lamawaka. Iinguqu ezahlukeneyo zecandelo elifanayo okanye umxholo wewebhu zibizwa ngokuba ngama-spun. Ngaphandle koko, umbhali obhala kwakhona inqaku lijongene nokubandakanya ukuhanjiswa kwiphepha lewebhu lokuqala kwi-text. Zonke ezi ziqhagamshelanisa iGoogle ukuba le website eyaziwayo kwaye iya kutshintsha injini yokukhangela ukuphucula umgangatho wayo.
Unokwenza ngokulula ukwenza amanqaku athile, kodwa umgangatho wabo awukwi kumakethi. Njengoko uyazi, kuthatha ixesha elide ukudala umxholo wangaphambili, kodwa oko kuya kunceda ukuphucula umgangatho wewebhusayithi yakho. Enyanisweni, i-content spun nayo yengubo emnyama ye-SEO yeqendu. I-Khachaturyan Nataliya, iSemalt Isiqulatho sesigxina, sithi inkathazo kukuba akukho ndlela efanelekileyo yokuphepha ukukhupha amanqaku.
Kutheni iinqununu ezihlawulayo zibi kwiWebhusayithi yakho
Kukhuselekile ukukhankanya ukuba ukuthengiswa kwinqaku kuyona ndlela idume kakhulu kwaye inokwethenjelwa yokuthengisa iimveliso zakho, iingcinga kunye neenkonzo kwi-intanethi. Iimononi zemihlathi zihlanjululwa imihla ngemihla, kwaye ezininzi iinkqubo zokuprinta kunye nesofthiwe ayinakunceda ukudala iikopi ezininzi zomxholo ofanayo..Ngokuqhelekileyo, amanqaku athungathwa ngenjongo yokuthengisa kunye nokudala ama-backlink ama-backlink kwiwebhusayithi.
I-Google ithandile umxholo omtsha
Iiinjini zokusesha zithanda umxholo omtsha kunye ochaphazelekayo. Iiblogi kunye neewebhusayithi ezishicilela rhoqo iimpawu zangaphambili ziphakanyisiwe kwi-injini ye-injini kwi-injini ye-injini kuneendawo kunye neeblogi ezingayithobeli ukupapasha amanqaku okuqala.
Zonke izixhobo zokuprinta izixhobo kunye nesofthiwe zenza iinguqu ezingafundwayo
Awuze uxhomekeke kwisixhobo sokuprinta iprogram okanye isofthiwe kuba zonke zivelisa amanqaku aphantsi kwaye angafundwanga. Ukuba usebenzisa isofthiwe yokuprinta, kufuneka uqinisekise ukuba umxholo ufundwa kwaye ulungelelwe ngokupheleleyo kwiinjongo ze-SEO. Ngelishwa, izixhobo zokuprinta izixhobo azithembekanga kwaye zibonelele ngeikopi zemixholo enzima ukuyifunda.
Amagama kunye namazwi ahlukeneyo, kwaye iingcinga kunye neengcamango ziyafana
Ngesixhobo sokuprinta isixhobo, unokwenza kuphela iikopi ezininzi zomxholo ofanayo, kodwa umgangatho awukhange ufike kumakishi. Amagama kunye nemibandela iyahluka, kodwa ingcamango ephambili kunye nengqiqo zihlala zifana. Kuthetha ukuba iprojekthi yokupaka ifayile iya kuvelisa iinguqu eziphantsi kuphela kwaye awukwazi ukuthembela kwiprogram enjalo njengoko ayiyi kunceda ukuphucula isayithi lakho.
I-article spinning is unethical
I-webmasters kunye neeblogi zikholelwa ukuba ukujikeleza kwamanqaku kungabalulekanga kwaye akufanele kube yinxalenye yobomi bethu. Ukuba uqaphela ukubaluleka komxholo oyingqamene nolunene, awusoze ufune ukuhlawula iqela lakho. Iikopi eziphindaphindiweyo zomxholo ofanayo zingabangela iingxaki kwiwebhusayithi yakho nakwezinye i-webmasters, kwaye yeso sizathu sijongwa njengesiqhelo nokuziphatha okubi Source .